Qaladaadkii Dhacay Sannadkii uu Xukunka hayay Farmaajo – Hornafrik Media Network
Dhacdooyinkii ugu waa weynaa sanadka dowlada.
Waxa dhacay 33 werar drone duqeyn cirka oo inta badan lagu laayey shacab Somaliyed inkasta oo aan qiyaaseyno in hadafku aha Alshabab in lagu dilo. Waxa Al-shabab qabsadeen 9-12 xarumo Ciidan oo ay ku dileen 450 Askari Kuna qaateen Saanad iyo sir ciidan, Amisom iyo SNA labadaba.
March 2017, waxa xeebaha Yemen lagu diley 42 qaxooti Soomaaliyeed oo kasoo qaxayey dagalada Yemen 🇾🇪, diyaradaha dagalka Saudi Arabia ayaa duqeeyay, wax laga qabtayna ma jiraan.
Werarkii Hay’adda NISA, ku qaaday Xarunta Xisbiga Wadajir, oo lagu dilay 5 waardiyihii Gurigaas Laguna dhaawacay dhowr qofood uu ka mid ahaa Siyaasiga weyn Abdirahman Abdishakur oo xabsiga loo taxaabay.
Maanta iyo Xuskii sanadka.
W.Qoray: C/salaan Guuleed-Taliye Xigeenkii Hore ee NISA